Redmi 9, Redmi 9A na Redmi 9C na-ekpughe nkọwa ha tupu e gosipụta ha | Gam akporosis
Redmi 9, Redmi 9A na Redmi 9C gosipụtara nkọwa ha tupu ebunye ha
La Redmi Rịba ama 9 ahịrị Ọ dịlarị ire ere n'ụwa niile, mana opekata mpe ọtụtụ ụdị na nso nso na-enweghị aha 'Cheta' ka ga-ama. Onye ọrụ Twitter Sudhanshu1414 kpughere mpempe akwụkwọ nwere ngwaọrụ atọ nke redmi 9 usoro na ọtụtụ nhazi ya.
A na-akpọ ndị a Redmi 9, Redmi 9A na Redmi 9C, a ga-enwe ụdị anọ, otu ga-enweghị NFC na onye ọzọ nwere NFC n’ihe gbasara nke atọ, 9C. Onye na-emepụta Asia ga-ebido ha na China wee nwee opekata mpe otu n'ime ndịiche ga-ahụ ìhè ụbọchị na ala Europe na 2020.
1 Redmi 9, atụmatụ ya
2 Redmi 9A, njedebe dị ala nke atọ
3 Redmi 9C, ekwentị ntinye ọkwa
Redmi 9, atụmatụ ya
Ọ ga-abụ ihe kachasị ike nke ụdị atọ ahụ, ọ gụnyere 6,53-inch IPS LCD panel na mkpebi Full HD +, Mediatek's Helio G70 na Mali G52, 4 GB nke RAM nchekwa na 64 GB nke nchekwa nwere ike ịgbasa site na MicroSD site na elu ruo 512GB. Batrị ahụ ga-abụ 5.000 mAh wee nye jaak 3,5 mm, Wi-Fi, Bluetooth, infrared na USB-C.
El Redmi 9 ga - enye ihe ruru ihe ntanetị anọ n’azụ ya, nke isi bụ 13 MP, nke abụọ bụ 8 MP angular sensor, nke atọ bụ 5 MP otu, na nke anọ bụ 2 MP omimi ihe omimi. Igwefoto selfie bu 5 MP. Ọnụ ego ahụ ga-eru euro 160 ruo 180.
Redmi 9A, njedebe dị ala nke atọ
N'ihi njirimara ya, ọ gaghị adọrọ mmasị, yana maka ọnụahịa ọ nwere ike bụrụ nhọrọ na-atọ ụtọ. Redmi 9A na-akwado 6,53-inch ihuenyo nwere mkpebi HD +, ihe mgbawa Helio G35 na Mali G31, 3 GB nke RAM, 32 GB nke nchekwa ma kwadebe ya batrị 5.000 mAh maka nnwere onwe dị ukwuu.
El Redmi 9A Ọ gaghị eguzo maka ngalaba foto, n'azụ ya otu sensọ 13 megapixel Na nke ị ga-ewere ụfọdụ ezigbo foto na enweghị nkwado nke akụkụ sara mbara, nnukwu ma ọ bụ ihe omimi omimi. Ihe mmetụta nke onwe bụ 5 megapixels. Ọ nwere njikọta dị ukwuu: jaak 3,5 mm, Wi-Fi, Bluetooth, infrared na ọ bụ Dual SIM. Ọnụahịa ahụ sitere na 100 ruo 120 euro.
Redmi 9C, ekwentị ntinye ọkwa
El Redmi 9C ga-enwe nsụgharị abụọOtu nwere NFC na nke ọzọ na-enweghị NFC, iche iche bụ na ihe nlele ahụ na-enweghị NFC ga-enwe sensọ atọ na azụ maka sensọ abụọ nke ga-enwe NFC. Ha abụọ nwere ogwe 6,53 nke nwere mkpebi HD +, Helio G35 na Mali G31, 3 GB nke RAM, 64 GB nke nchekwa na batrị 5.000 mAh.
Reddị Redmi 9C na-enweghị NFC nwere ihe mmetụta atọ n’azụ, onye isi 13 MP, nke abụọ 5 MP na nke atọ bụ 2 MP, ihe nlereanya na NFC na-ejikọta ihe mmetụta abụọ azụ, nke mbụ bụ 13 MP na omimi nke abụọ nke 2 MP. Ihe mmetụta selfie bụ otu ihe ahụ maka nke abụọ, otu 5 MP. Ha bụ ekwentị SIM abụọ, ọ nwere njikọ jaak 3,5 mm, Wi-Fi, Bluetooth na njikọta ndị ọzọ. Ọnụahịa ya sitere na 130 ruo 150 euro.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Redmi 9, Redmi 9A na Redmi 9C gosipụtara nkọwa ha tupu ebunye ha
Google na-edozi flaws nchedo gam akporo abụọ kachasị mkpa nke nyere ikike igbu koodu
Google gbasaa nkwado maka ArCore: You nwere ike ịhụ anụmanụ 3D ruo ngwaọrụ 21 ọhụrụ